Azụmaahịa Ọha, mgbanwe ọgba aghara | Martech Zone
Azụmaahịa Ọha, mgbanwe ọgba aghara
Monday, March 19, 2012 Tuzdee, Machị 20, 2012 Marty Thompson
Mgbasa mgbasa ozi na mmekọrịta mmadụ na ibe ya bụ akụkụ dị mkpa nke otu ụlọ ọrụ si azụ ahịa. Ọ ghọwo nke nwere njikọ chiri anya ma jikọtara ya na mbọ ire ahịa anyị. Ndị na-ere ahịa dijitalụ enweghị ike ikwu maka ọdịnaya, SEO, njikarịcha weebụsaịtị, PR. Ndị ahịa, ma ha ghọtara ya ma ọ bụ na ha amaghị, ugbu a nwere ọrụ ọhụụ kpamkpam n'ime ụlọ ọrụ. Ha na-arụ ọrụ dị iche iche dị iche iche n'ọtụtụ n'ime ndị na-ere ahịa na-echekwa otu ihe mgbe ọ gbachiri nkịtị.
Anyị dị ka ndị ahịa nwere ike ghara imeli na-eche nke “ịbụ onye na-elekọta mmadụ”Dị ka ihe dị iche na ọrụ ndị ọzọ anyị.
Eziokwu a na-elekọta mmadụ ugbu a na-abanye n'ọzọ ọzọ. Organitù dị iche iche na-elekwasị anya ugbu a na otu ha ga - esi meziwanye n'ime, na - erite uru nke ọhụụ ọhụrụ a nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Dị ka ọganihu e mere na ERP, CRM, ahịa akpaaka, na mpaghara ndị ọzọ, azụmaahịa mmekọrịta mmadụ na ibe ya bụ ọgba aghara ọzọ dị jụụ, na-ewere nwayọ mgbe ụfọdụ, na ndị ọzọ ngwa ngwa.
Arụmụka banyere ihe azụmahịa mmekọrịta mmadụ na ibe ya pụtara, na uru ọ bara "ọ" na-eweta, ma ọ bụrụ na ọ dị, na-ada ada na ụfọdụ okirikiri. Mana n'uche m, ọ na - anọchite ọgbaghara mgbanwe ọzọ dị jụụ. Anyị etetaghị n’ụbọchị wee chọta IBM, SAP, Oracle, Salesforce na ndị ọzọ, emere ozugbo, dị njikere maka nkenye. Naanị jụọ ndị egwuregwu ụlọ ọrụ a, ha ga-akọkwa akụkọ ndị na-akpali akpali maka ihe kpatara mmekọrịta mmadụ na ibe ya bụ ihe na-esote. Ha na-anabata mmekorita mmekọrịta mmadụ na ibe ya dị ka ihe bara uru. Olileanya m bụ na anyị niile nwere ike iji ohere a mee ihe ọ bụghị naanị ịnapụta uru ọrụ ọzọ, kamakwa iji nye ala ọhụụ ebe enwere ike ịme mmemme nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ee, ekwere m n'ike nke geeks.
Businesseslọ ọrụ ndị ahụ ga-erite uru site na mbọ ndị a nwere ike na-ekele ndị jikọtara ọrụ mmekọrịta mmadụ na ibe ha na ọrụ ndị ahịa na nkwado, ahịa, na mpaghara ọrụ ndị ọzọ. Ha gụnyere ndị tinyeworo nnukwu ego na iwulite mmekọrịta ọha na eze mara mma, ndị ọrụ na ndị na-akwado nkwado, usoro nhazi ihe ọmụma siri ike, yana ndị ewerela echiche nke mmekọrịta mmadụ na ibe ha CRM ma wuo ya. Azụmahịa mmekọrịta ọ bụ naanị nwughari nke mbọ ndị a? Echere m na azịza ya bụ mba, mana ọtụtụ n'ime ihe ndị a mụtara, yana ọtụtụ ihe mmekọrịta mmekọrịta mmekọrịta ga-adị ka ụgwọ a ga-akwụ maka mbọ ndị a.
Ya mere, gịnị banyere azụmahịa gị? You na-amata uru niile nke atụmatụ azụmaahịa agbakwunyere gụnyere ọgụgụ isi mmekọrịta mmadụ na ibe ya? Kedu ihe bụ echiche gị banyere ihe ọ pụtara ịbụ azụmaahịa mmekọrịta mmadụ na ibe ya?
Tags: Njikwa ObodoDK New MediaMarty ThompsonBusiness Businesselekọta mmadụ media
Abụ m onye na-azụ ahịa azụmaahịa na ahịa unere abụọ. Kwuo ya na nne na nna m, nzụlite obi m, ma ọ bụ ihe m na-eche banyere oge gara aga, mana ndị mmadụ na-agwa m na m bụ n'ezie, dị ezigbo mma na mmekọrịta mmekọrịta na mkparịta ụka, imechi ọdịiche dị n'etiti ihe ndị ahịa na-atụ anya, na ihe nnukwu ụlọ ọrụ kwesịrị ịbụ (mana ọ na-abụkarị abụghị)
Chọta Njikọ Inbound n'ụzọ dị mfe na Blekko
Akụkọ banyere mgbanwe Google algorithm
Echere m na anyị nwere ọtụtụ afọ iji dozie usoro nlekọta ụlọ ọrụ anyị na azụmaahịa mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Anyị ka na-emepe emepe ngalaba site a mmepụta akara usoro mgbe eziokwu bụ na ngalaba niile mmetụta a ika mmetụta na-elekọta mmadụ media - si ochichi, na-elekọta mmadụ, na ahịa marketing ọ bụla na-arụ na-arụ ọrụ. O di nwute, nke ahụ abụghị otu esi ahazi osisi ike anyị, n'agbanyeghị. Anyi na aga n’ihu ka ewepu anyi na ozi anyi choro… ma choo!
Therega ebe ahụ ga-atọ ụtọ, ọ bụ ezie!